Izindawo Zendawo - Uma ufinyelela i-Inthanethi usebenzisa i-VPN, wonke amaphakethe wedatha aqhamuka kwiseva ekude aye kwikhompyutha yakho noma kwidivayisi yeselula kumele adlule kumaseva womhlinzeki wakho we-VPN. Ngokusebenza okuphezulu, khetha i-VPN yama-PC anamaseva emhlabeni jikelele. Vele, izethembiso zeVPN ngokufinyelela komhlaba akuqinisekisi ukusebenza okuhle kakhulu, kepha kuyisibonakaliso esibalulekile sokuthi ingqalasizinda yomhlinzeki ithuthukile futhi iyakwazi ukuletha ukusebenza okuphezulu.
Ngikhethile ExpressVPN ngoba inezindawo eziyi-160 zamaseva emazweni angama-94, isebenzisa ukubethela okungama-256-bit, inezinhlelo zokusebenza ezandisa indawo yakho, futhi inamanani nokusekelwa okuhle. Ngokushesha nje lapho ngivula i-Mac yami noma ngixhuma kunethiwekhi ku-iPhone yami, ngibona i-VPN ixhuma futhi sengiyasebenza! Akudingeki ngenze noma yini ukumisa noma ukuxhuma nganoma yisiphi isikhathi… konke kuzenzakalelayo.